VIDEO: Xogta 14 maxbuus ee Puntland ku wareejisey DFS & Cidda ka soo wareejisey Seychelles
April 30, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Wasiirka caddaaladda xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhowaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ka qaaday 14 maxaabiis ah oo u xukuman falal burcad badeednimo, kuwaasi oo horay loogu soo wareejiyey deegaamada Puntland inkastoo lagu maxkamadeeyey dalal ajaaniib ah.
“ Heshiiska wareejinta maxaabiista xukman ee Burcad-badeedda oo dhexmaray Puntland iyo dowladda Seychelles, islamarkaana aan goob-joog ahaa waxa la saxiixay 21 April 2011, waxaana lagu saxiixay magaalada Dubai ee waddanka Imaaraatiga Carbeed” ayuu yiri agaasimihii hore ee La-dagaallanka Burcad-badeedda Puntland Cabdirisaaq Maxamed Dirir Abdirizak Ducaysane.
Heshiiskaasi waxaa kala saxiixday Wasiirkii Arrimaha gudaha dowladda Seychelles Joel Morgan iyo Wasiirkii Dekedaha Puntland Siciid Maxamed Raage, wuxuuna heshiisku dhigayey in muddo kooban Puntland loogu wareejiyo maxaabiis tiradooda gaarayso 69 xubnood.
Dhanka kalena agaasime Ducaysane ayaa sheegay in goobtii heshiiskaasi lagu saxiixayey uu ku sugnaa kana qayb-galay madaxweynaha Puntland ee haatan, Siciid Cabdullaahi Deni oo wakhtigaas matalayay Ganacsatada deegaanada Puntland.
Sida muuqata Dowladda Seychelles ma ictiraafsana maamulka uu horboodayo kaligii taliye Ismaqiiqe farmaajo iyo kooxdiisa. Waana inta uu diidan yahey inuu sheego Gaylan. Puntland waa ka weyn tahey wax ku qarsoomi kara gacan wiil DAANWEYNE ah. Ismaqiiqe farmaajo waxba kama ah Puntland. Xamar ayaa Seychelles uga dhow Boosaaso, Maxaa u diidey in Xamar la geeyo maxaabiisata, tan kale muxuu Ismaqiiqe farmaajo iyo kooxdiisu lacagta u weydiisyeen haddii maxaabiisa laga dajinayo Xamar?